हेर्नुस् आजको राशिफल : साउन ३० गते, शुक्रबार
मङ्गलबार, चैत ३१, २०७७
सुत्केरी श्रीमती छोडेर श्रीमान भागे, काखमा बच्चा बोकी श्रीमान खोज्दै शहर पुगिन (भिडियो)
३ हप्ता अगाडी
आमालाई बलात्कार गर्न लगाउछु भन्ने शर्मिला र पुण्यलाई मुद्धा हाल्छु (भिडियो सहित)
सपना मगरको कलिला हातले दिईन लस्करै ८ जना वेवारिसे लाई दागबत्ती (भिडियो सहित)
४ हप्ता अगाडी
श्रीमती काटेर बोरामा हालेपछी पैसा र सुन लुट्ने श्रीमान पक्राउ (भिडियो सहित)
जिरी नगरपालिकाले किवीको विरुवामा अनुदान भन्दै दोब्बर मुल्यमा बेचेपछी
विप्लव समूहले अन्तरिम संयुक्त सरकार साथै राजावादीसँग छलफलको तयारी थाले
२ वर्षपछी विप्लव काठमाडौंमा सार्वजनिक हुँदै
एकै पटक २२ चक्की औषधि सेवन, गम्भीर बिरामी दुई किशोरी काठमाडौ रिफर
अब सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य
१. श्रीमती काटेर बोरामा हालेपछी पैसा र सुन लुट्ने श्रीमान पक्राउ (भिडियो सहित)
२. आमालाई बलात्कार गर्न लगाउछु भन्ने शर्मिला र पुण्यलाई मुद्धा हाल्छु (भिडियो सहित)
३. सुत्केरी श्रीमती छोडेर श्रीमान भागे, काखमा बच्चा बोकी श्रीमान खोज्दै शहर पुगिन (भिडियो)
४. जिरी नगरपालिकाले किवीको विरुवामा अनुदान भन्दै दोब्बर मुल्यमा बेचेपछी
५. सपना मगरको कलिला हातले दिईन लस्करै ८ जना वेवारिसे लाई दागबत्ती (भिडियो सहित)
दोलखा जिरी नगरपालिका काठमाडौं राजेश हमाल बखत बिष्ट विप्लव राशिफल
शुक्रबार, साउन ३०, २०७७ मा प्रकाशित
गीत संगित तथा कला साहित्यमा समय दिनेहरुले मनग्गे लाभ लिन सक्नेछन् । प्रेमको डोरो कसिलो भएर जानेछ । कामहरु समयमा नै सम्पन्न हुने हुनाले थप काम गर्न जोस जाँगर बढेर आउनेछ । व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जानेछ भने आम्दानीका बाटाहरु फराकिला हुनेछन् । अध्ययन तथा अनुसन्धानको क्षेत्रमा राम्रो प्रगति गर्न सकिनेछ भने तपाईँको बौद्धिकताको सबैले सम्मान गर्नेछन् ।
बृष (ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो) राजनीतिकर्मिहरुका लागि जनताको काम समयमा गर्न सकिने हुनाले पद प्राप्तीको गतिलो योग रहेको छ । विद्यार्थी वर्गहरुका लागि मेहनत गरि अध्ययन गर्दा उत्कृष्ट नतिजा हात पार्ने योग रहेकोछ । सुन्दर तथा विलाशिताका सर सामान प्रयोग गरि अरुको ध्यान आफूतिर आकर्षित गर्न सकिनेछ । लामो समयदेखि बिछोड भएका मित्रहरुसँग भेट हुनाले दिन रमाइलो गरि बिताउन सकिनेछ । नयाँ प्रबिधिको प्रयोग गरि रचनात्मक कार्य गर्न सकिनेछ ।
समयमा काम नबन्ने हुनाले आर्थिक पाटाहरु कमजोर रहनेछन् । लेनदेनको विवादले आत्म सम्मानमा दाग लाग्न सक्छ ख्याल गर्नुहोला । टाढाको यात्रा हुने भएपनि यात्राको क्रममा दुख पाइनेछ । विदेशमा बसेर काम गर्नेहरुका लागि वा विदेशी सामानको व्यापार गर्नेहरुका लागि समय राम्रो रहेकोछ । शरिरमा आलश्यता बढेर जानेछ भने भौतिक तथा विलाशी बस्तु हराउन सक्छ ख्याल गर्नुहोला । साझपख समय राम्रो रहेकोले सुधारात्मक काम गर्न सकिनेछ ।
व्यवसाय फस्टाएर जानेछ भने दैनिक कारोबार बढ्ने योग रहेकोछ । विशिष्ट व्यात्तिहरुको भेटघाटले व्यवसायमा लगानी बढाउन सहयोग पुग्नेछ । सामाजिक क्षेत्रमा तपाईँलाई सबैले मान्नेछन् भने नेतृत्व लिनु पर्ने अवस्था आउनेछ । जनताको कामहरु समयमा गर्न सकिने हुनाले इज्जत प्रतिष्ठा बढेर जानेछ । प्रेममा उच्च सफलता प्राप्त हुनेछ भने लामो समय देखिको प्रेमलाई बिवाहमा परिणत गर्ने सहमति आफन्तबाट प्राप्त हुनेछ । साझपख समय मध्ययम रहेकोले यात्रा गर्दा ध्यान दिनुहोला ।
राजनीति तथा समाजसेवमा जनताको साथ तथा समर्थन पाइनेछ । नयाँ काम पाउने तथा व्यापारमा प्रसस्त आम्दानि हुने हुँदा आर्थिक स्थिति सुदृढ हुनेछ । कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय फस्टाएर जानेछ । अध्ययनमा राम्रो सफलता हात लाग्नेछ । प्रणण सम्बन्धको डोरो कसिलो भएर जानेछ । पैत्रिक सम्पति तथा सरकारी सम्पतिको प्रयोग गर्न पाइने हुँदा मन प्रशन्न हुनेछ ।
परोपकार तथा पुन्य काममा समय खर्चिनु नै आजको लागि राम्रो रहेकोछ । समाजमा आफ्नो बर्गको नतृत्व लिने अवसर आएपनि काम गर्न नसक्दा मान सम्मानमा कमि हुनेछ । आफन्त तथा माता पितासँग मनमुटाब सिर्जना हुने योग रहेकोछ । पढाइ लेखाइमा समय दिएपनि भनेजस्तो सफलता हात नलाग्ने अधिक सम्भावना रहेकोछ । स्वास्थ्यमा समस्या आउने हुनाले दैनिक कामहरु प्रभावित हुनेछन् ।
स्वास्थ्यमा समस्या आउने हुनाले आहार बिहारमा ध्यान दिनुहोला । आफन्त तथा दिदीबहिनीसँग मनमुटाब बढ्नेछ भने समय अनुसार अपडेट नहुँदा अरुभन्दा पछि परिनेछ । व्यापारमा तत्काल लगानी नगर्नु नै राम्रो रहनेछ । पढाइ लखाइमा ध्यान नजादा अरुकै नाम अग्र स्थानमा आउनेछ । माया प्रेममा सामान्य मनमुटा सिर्जना हुनेछ भने जीवन साथीसँग ठाकठुक पर्नेछ । साझपख समय राम्रो रहेकोले सुधारात्मक कामहरु गर्न सकिनेछ ।
टिम निर्माण गरि काम गरिएपनि एक अर्काको बिचार नमिल्दा केही दिनको लागि काम बन्द हुनेछ । महिला मित्र तथा विपरित लिंगसँग पनि मतभेत देखिने प्रशस्त सम्भावना रहेकोछ । भौतिक सम्पति तथा सवारी साधनको प्रयोग गर्दा ख्याल गर्नुहोला बढी नै उत्साहित हुँदा नराम्र घट्नाहरुको सामना गर्नु पर्नेछ । व्यवसायिक यात्रा हुने भएपनि कष्ट कर नहोला भन्न सकिन्न । मनमा बेचैनले गतिलो डेरा जमाउनेछ ।
व्यवसायमा प्रशस्त आम्दानी हुने तथा पुराना कारोबारहरुलाई सल्टाउने समय रहेको छ । सत्रुले दुख दिन खोजे पनि अन्तत उनिहरुलाई परास्त गर्दै अगाडि बढ्न सकिनेछ । आफन्त तथा मावलि पक्षबाट सहयोगको अपेक्षा गर्न सकिनेछ । विवाद तथा न्यायिक निर्णयहरुबाट हुने सुनुवाई तपाईँकै पक्षमा हुने हुनाले मन प्रशन्न हुनेछ । पढाइ लेखाइमा प्रतिद्धन्द्धिहरुलाई किनारा लगाउँदै नतिजा आफ्नो पोल्टोमा पार्न सकिनेछ ।
पति पत्निबीचको सम्बन्धले दाम्पत्य जीवन सुखद रहनेछ । सन्तान तथा आफन्तको सहयोगले प्रभावशाली काम बन्नेछ । नोकरीमा समाजोपयोगी कार्यको प्रशंसा सर्वत्र होला । राजनैतिक गतिविधिले समाजमा प्रभावशाली व्यक्तित्व विकासमा टेवा पुर्याउला । अध्ययनमा उच्चता हाँसिल होला । वैदेशिक रोजगारीले जीवनस्तर सुधार्नमा मद्दत गर्नेछ । जग्गा जमिनको कारोबारले फाइदा गराउनेछ ।
धर्ममा श्रद्धा र परोपकारमा मन जानेछ। स्वास्थ्यमा भने कमजोरी अनुभव हुनेछ। सानातिना काममा अल्झनुपर्दा आफ्ना योजना समयमा सम्पादन नहुन सक्छन्। आशा देखाउनेहरूको भरपर्दा धोका पाइनेछ। चुनौतीपूर्ण कामको दायित्वले कठोर निर्णय गराउन सक्छ। अप्ठ्यारा परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नुपर्ला। सफलता भने न्यून मात्र हातलागी हुनेछ। साझको समय मध्ययम रहेकोले अध्ययनमा मन जानेछ ।
सानो प्रयत्नले राम्रो काम गरि फाईदा लिन सकिनेछ भने प्रतिस्पर्धिहरु परास्त हुनेछन् । माया प्रेममा सामिप्यता बढेर जाने तथा मिल्ने साथीको सहयोगले कामहरु बन्नेछन् । रोकिएर बसेका कामहरु बन्नुको साथै विस्तारै नयाँ काम बन्नेछन् । पढाइ लेखाइमा सुधार गर्दै सफलताको नजिक पुग्न सकिनेछ । छिमेकिहरु माझ राम्रो कामगरि प्रशिद्धि कमाउन सकिनेछ । साझपख समय मध्ययम रहेकोले सवारी साधन तथा घर जग्गाको कारोबार गर्दा ध्यान दिनुहोला ।
१. सुत्केरी श्रीमती छोडेर श्रीमान भागे, काखमा बच्चा बोकी श्रीमान खोज्दै शहर पुगिन (भिडियो)
३. सपना मगरको कलिला हातले दिईन लस्करै ८ जना वेवारिसे लाई दागबत्ती (भिडियो सहित)
४. श्रीमती काटेर बोरामा हालेपछी पैसा र सुन लुट्ने श्रीमान पक्राउ (भिडियो सहित)
५. जिरी नगरपालिकाले किवीको विरुवामा अनुदान भन्दै दोब्बर मुल्यमा बेचेपछी